Indlu enevaranda yale mihla i-Exloo enegadi enkulu yabucala - I-Airbnb
Indlu enevaranda yale mihla i-Exloo enegadi enkulu yabucala
Indlu enevaranda entle kakhulu ( ngoJanuwari 2021) Yonke into intsha ibe ifenitshala.
Yindlu enevaranda entle. Inamagumbi okulala ayi-3, igumbi lokuhlala elinekhitshi negumbi lokuhlambela.
Yonke into ngaphakathi kwindlu enevaranda intsha. Upheka ekhitshini elitsha, uhlale kwisofa entsha, ishawa kwigumbi lokuhlambela elitsha ibe zonke izinto zintsha. Indlu enevaranda igqitywe kakhulu. Kukho nesitovu esithandekayo sokhuni kwigumbi lokuhlala ecaleni kwesixhobo sokufudumeza indlu.
Ngaphandle unegadi engaphezu kweemitha eziyi-1100 square.
Indlu enevaranda entle enegadi enkulu evalekileyo ( engaphezu kweemitha eziyi-1100 square) apho unokonwabela indalo. Ungabona ezona ntaka zintle zidlula egumbini lokuhlala. Kwaye rhoqo, kukho ii-squirrels egadini. Kwaye ukuba awuziboni zisaphila... ungabukela imizobo entle ye-chainsaw egadini. Le nto yenziwa ngumzobi owaziwayo womthi. Unokonwabela ngokupheleleyo igadi entle egcwele izityalo, i-Drenthe pebbles kunye ne-turf entle. Kukho ityeya entle kunye negadi egadini.
Yindlu enevaranda entle apho yonke into ihlaziyiwe. Ipeyinti entsha, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, iikhethini, ifenitshala nezinto ezipheleleyo. Yonke into intsha! Sicinga ngayo yonke into... ngoko ubukela iTV kwi-smart TV enkulu, kwaye ungasebenzisa i-Netflix kunye ne-WiFi simahla.
Yindlu enevaranda entle kwindawo entle! Kukho igadi enkulu ejikeleze indlu enevaranda. Indlu enevaranda isemgangathweni ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlala elihle, ikhitshi elisebenzayo, igumbi lokuhlambela elitsha kunye namagumbi okulala ama-3 athandekayo. (igumbi 1: iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye ezinokuhlukaniswa okanye zimelane, igumbi 2: ibhedi entle enomatrasi omfumamfuma, igumbi lokulala 3: ibhedi entle enomatrasi omfumamfuma.
Sicinge ngayo yonke into... xa ungena, ikofu kunye neti sele zilungele wena kwaye iibhedi sele zenziwe! Ngamafutshane, unokonwabela iholide yakho ngoko nangoko. NgoFebruwari 2021, kwabekwa umjikelo wabucala kule gadi intle, enokusetyenziswa ngabantwana bakho kweli hlobo. Umjikelo unesitulo sosana kunye nesitulo esiqhelekileyo. Yindawo yokujinga esemgangathweni, ngoko ke ilungele ukusetyenziswa ngabantu abadala.
Kukho i-WiFi entle nekhawulezayo. Ungayisebenzisa simahla le nto. Ungakwazi nokufikelela kwi-smart TV ngoNetflix!
Yigadi enendawo eninzi yokudlala yabantwana. NgoFebruwari 2021 kukho i-robotinia yeplanga enesitulo esiqhelekileyo apho kumntwana /kumntwana. Umjikelo womelele kakhulu... ngoko ke utata kunye nootata bangayisebenzisa nabo. Le ndawo yokujinga ikwikona yegadi ukuze iindwendwe ezingenabantwana zonwabele ezinye izinto egadini yethu.
Le ndlu inabo bonke ubutofotofo. Xa ufika unokonwabela iholide yakho kwangoko. Iibhedi zenziwe, kukho iitawuli ezenzelwe wena! Ukuba ungathanda ukusebenzisa isitulo sokutyisela usana nebhedi yokukhempisha, nceda uyichaze. Siza kukubeka simahla oku kwindlu enevaranda.
Ekhitshini uza kufumana uluhlu olutsha lwekhitshi. Yonke into ikhona... ukusuka kwi-pepper kunye netyuwa, ukuya kwii-BBQ tongs, i-toaster njl njl.
Izinja zivunyelwe kwindlu enevaranda. Egadini kukho nendawo enkulu yokuzilolonga yenja yakho. Kwaye ukuba uhamba imizuzu emibini ukusuka kwindlu enevaranda ungangena kwindawo entle yendalo. Apha ungahamba kakuhle kwindalo kaDrenthe. Ungahamba phakathi kweengcungcu, iibhedi zabo kunye namahlathi amahle.
Singakubekela ikhothi nesitulo kwindlu enevaranda.
Ininzi into onokuyenza epakini... kukho ibala lokudlala, umkhondo wempompo, inkundla yentenetya, ibala lebhola yevoli, iitafile zethenisi, izixhobo zokujima zangaphandle kunye nebala lebhola kwaye uhamba umzuzu ukusuka kwindlu enevaranda ukuze ungene ehlathini kunye neendlela ezininzi ezintle zokuhamba ngeebhayisekile. Kunyanzelekile ukuba ube nabantwana! Le yindlela yokuhamba egcwele izixhobo zokudlala ehlathini.
Ehlotyeni ungabhatala imali encinci ukuya kwipuli ephandle iLeewal. Le yipuli entle ephandle phakathi kwehlathi kunye nempumlo.
Ngemali encinci, ungasebenzisa indawo encinci yokudlala igalufa nebhayisekile epakini.
Ininzi gqitha into onokuyichaza kule ndawo intle. Eyona nto kumntu wonke efana nale: - indawo enkulu kakhulu yokugcina indalo ekufutshane nepaki. Uhamba esangweni ngasemva kwepaki kwaye uqala ngeendlela eziyi-5 ezahlukeneyo zokuhamba ngeenyawo. Ungabona yonke into apha efana nokufuya, iibhedi zedada, indalo nezinye izinto.
- kabouterland Exloo (imizuzu eyi-5)
- i-zoo Wildlands Atlanen (imizuzu eyi-15)
- imyuziyam ye-hunebed Borger (imizuzu eyi-10)
- ipaki enomtsalane i-Drouwenerzand (imizuzu eyi-15) - i-trout fish pool (imizuzu eyi-10)
- treetop trail (imizuzu eyi-15)
- ivenkile enkulu (imizuzu eyi-5)
- ivenkile yokubhaka
(imizuzu eyi-5) - ibala elikhulu legalufu kunye neziko le-equestrian Exloo (umzuzu omnye) Kwaye ininzi into onokuyifumana uze uyenze eDrenthe!
Epakini unokuzonwabisa ngokukhethekileyo ngalo lonke uxolo nokuzola.
Kwihotele (ngaphandle kokubhatala) unokonwabela ivenkile yokutyela, i-terrace, i-miniglof, kwaye yonke le nto yimizuzu eyi-1 xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwindlu enevaranda.
Ungasebenzisa inkundla yentenetya, iitafile zethenisi kunye netrampoline enkulu yomoya simahla.
Imizuzu eyi-10 yokuhamba ngebhayisekile ukusuka kwindlu enevaranda uza kufumana ipuli yokuqubha yangaphandle. ( De Leewal) Apha ungadada ngemali encinci.
Siyakuthanda ukukufumana ngokobuqu, kodwa ukusebenzisa isitshixo kukhuselekile nako kukhetho.
Xa uphuma, ungasebenzisa isitshixo kwakhona okanye wenze oku kunye nathi.
Sisoloko sifumaneka ngefowuni. Ungasoloko ufowunela, usebenzise i-app, okanye uthumele umyalezo ngo-airbnb. Sisoloko sikhawuleza ukuphendula imiyalezo size senze konke esinako ukuze uhlale kamnandi.
Siya epakini phantse veki nganye. Ungathetha nathi nanini na.
Xa uphuma, ungasebenzisa isitshixo kwakhona okanye wenze oku kunye nathi.…